NgoLwesithathu, July 21, 2010 NgoLwesibili, Okthoba 4, 2011 ULorraine Ball
Abathengisi bobabili bathanda futhi bayazonda ama-sweepstake nemincintiswano. Ngenkathi amathuluzi asebenzayo okwakha ukuqwashisa komkhiqizo futhi akhiqize uhlu lokulindelwe, ayadina, adla isikhathi, futhi ayinselele ukuwaphatha. Ngakho nini UDaniel Herndon weRed Wall Live yeza nomqondo omubi wokubuyiselwa ezinyusweni zesikole weklayenti lethu UDkt Jeremy Ciano weRevolutionEyes Ngangijabule ngalo mbono, kodwa ngikhathazekile ngokubulawa.
Abazali bahambisa izithombe zezingane zabo ezigqoke izibuko nezibuko zelanga
Ngemuva kwalokho bathola abangane babo nemindeni yabo ukuthi bavote.
Ingane enamavoti amaningi iwina ukuhamba ngendiza enophephela emhlane, amathikithi omdlalo we-Ice nokugibela emshinini we-zamboni, kanye nokuvakasha ngemuva kwezigcawu e-zoo.
Izinhloso zomncintiswano, azilula kangako:
Qoqa izithombe esingazisebenzisa ukwakha ukuqwashisa ngomkhuba wabantwana
Yakha abalandeli bekhasi le-facebook
Qoqa amakheli e-imeyili
Abaphathi babesabisa. Kepha lesi yisikhathi se-inthanethi ne-iPhone, futhi kuhlala kune "App" yalokho. Kulokhu uhlelo lokusebenza luthi Wildfire. Engikuthandayo Ngokusebenzisa i-Wildfire:
Kwakulula ukwakhiwa komkhankaso. (Ngokuya ngokuthi ungakanani isikhathi ofuna ukusisebenzisa kumidwebo ongaba ngaphansi kwesikhathi esingaphansi kwehora)
Sinezinketho: Ama-sweepstake, amakhuphoni, izithombe nemincintiswano yama-eseyi
Ifaka kalula ekhasini le-fan.
I-Facebook ayidingeki -Umlilo womlilo uphinde unikeze iwijethi elula yewebhusayithi kanye ne-microsite ongaqondisa nabancintisana nayo.
I-interface yomsebenzisi elula yenza kube lula ukuthi abantu bameme abangani babo futhi bandise umncintiswano kahle.
Intengo iyafaneleka. Ngokuya ngobude bomkhankaso, kanye nenani lokwenza ngokwezifiso okudingayo, isabelomali sakho sokuphatha sizoba yingxenyana yalokho obekubiza ukwenza uhlelo olufana nalolu. (Isabelomali sikaDkt Ciano sisebenzise cishe ama- $ 200 kulolu hlelo lwamasonto ayisithupha)
Engingakuthandi ngomlilo wasendle: (Ake sibhekane nakho, akukho lutho oluphelele)
Ukuhanjiswa okukodwa kuphela kwikhompyutha ngayinye - ngiyasiqonda isizathu, kepha lokhu kusivimbela ekusayineni abantu njengoba beza ehhovisi likaDkt Ciano. Ngenkathi singakhipha izikhumbuzo, akuwona wonke umuntu ozoya ekhaya azenze. (ngemuva kokuthi ngibhale lokhu okuthunyelwe, sithole indlela yokwandisa inani lezethulo, ngakho-ke into eyodwa encane esingayithandi)
Singabamba ama-imeyili wawo wonke umuntu ohambisayo, kepha hhayi wonke umuntu ovotayo. Inzuzo yangempela yalo mkhankaso ukwandisa uhlu lwamakheli. Ngakho-ke sifuna o abazali NABO bonke abangane babo namalungu omndeni. Ukufeza lokhu, sizoshintshela ku I-Formstack ukuvota
Ngezansi… Ngijabule ngomlilo wasendle, futhi ngizohlola ukuhlukahluka okuningi kwamakhasimende ezinyangeni ezizayo. Kubandakanya okwethu: Ukwenziwa kwekhadi le-Biz Uke wasebenzisa umlilo wasendle? Yikuphi okuhlangenwe nakho oke waba nakho ngomkhiqizo?
Ungakhohlwa uku - faka ingane yakho noma umzukulu wakho ukuwina i- gibela indiza enophephela emhlane, umshini we-zamboni nokuningi!
Tags: ukukhangisa ngevidiyo